Introduction: Imwe-nzira batira chinhu zvokuimba pakuderedza kuti vabudirire mashandiro anozvipira batira. It nderei chikamu electromechanical ngarurege uchishandisa nokukurumidza kuchinja kana kutenderera mirayiridzo yezviri kana kutinhwa zvikamu. The Kubatana chimiro rakakamurwa kuva: kubatana anokosha, bhaudhi kubatana, chisimudziso kubatana, neketani vhiri kubatana, etc .. chikuru basa raro kudzivirira neizvi, Positioning yakarurama, torque yedzimudzangara kana kutema torque. Saka, ayo anonziwo backstop kana mumwe-nzira kubereka ...
Imwe-nzira batira chinhu zvokuimba pakuderedza kuti vabudirire mashandiro anozvipira batira. It nderei chikamu electromechanical ngarurege uchishandisa nokukurumidza kuchinja kana kutenderera mirayiridzo yezviri kana kutinhwa zvikamu. The Kubatana chimiro rakakamurwa kuva: kubatana anokosha, bhaudhi kubatana, chisimudziso kubatana, neketani vhiri kubatana, etc .. chikuru basa raro kudzivirira neizvi, Positioning yakarurama, torque yedzimudzangara kana kutema torque. Saka, ayo anonziwo backstop kana mumwe-nzira mabheyaringi.
Application: repair otomatiki hutachiwana, mudhudhudhu yemagetsi kutanga, muchina maturusi, kavha michini, kudhinda michini, chiedza michini nezvimwe nomuviri wazvo.
Next: aluminum bhora
Hwaswedera Cup Roller Clutch
Sprag Clutch Kupa